Unikezwe ibhande engasekho uButhelezi olimale eringini
USIMISO Buthelezi umshayisibhakela ubefihlwa kubo eDumbe izolo, uphelezelwe ngebhande le-WBF ashone ngesonto eledlule kade elilwela Isithombe: ZAKHELE XABA
Zakhele Xaba | June 13, 2022
UZOHLONISHWA ngendumezulu yomqhudelwano wezimpi umshayisibhakela, uSimiso "Gandaganda" Buthelezi, ofihlwe eBilanyoni, eDumbe izolo.
UButhelezi udlule emhlabeni ngesonto eledlule emuva kokungeniswa esibhedlela Inkosi Albert Luthuli, kulandela ukulimala eringini ebhekene noSiphesihle Mntungwa empini yebhande le-WBF All Africa Lightweight eGreyville, eThekwini.
Izimpi zazihlelwe yiStarline Boxing Promotions nalapho uButhelezi wabonakala ediyazela eringini kucaca ukuthi akasaboni ukuthi kwenzekani, wagcina ngokuphuthunyiswa esibhedlela.
UButhelezi ushiye emhlabeni unina nodadewabo ababili. Ubekade esalwe izimpi ezine esibhakeleni esikhokhelayo. Esigabeni sama-amesha ulwe ezingu-30, waziwina zonke. Kubantu abebekade behambele umngcwabo bekukhona uHlengiwe Mavimbela onguNgqongqoshe wezeMidlalo ubuCiko namaSiko, iMeya yaseZululand uThulasizwe Buthelezi, usihlalo webhodi ye-Boxing South Africa (BSA) uLuthando Jack, izinkakha zesibhakela nabashayisibhakela.
Nakuba bekunomunyu kodwa kushaywe ihlombe ngesikhathi uButhelezi ememezela ukuthi bazohlela izimpi zokukhumbula uSimiso ngaphambi kokuthi isifunda iZululand siyoqhudelana nezinye emidlalweni yama-Salga eNewcastle ngoDisemba.
"Nisazobuya lapha eZululand, Starline Boxing Promotions nizobuya lapha eZululand. Iqembu lalapha lizoya kuma-Salga ngoDisemba eNewcastle. Kodwa ngaphambi kwalokho kuzoba khona iSimiso Buthelezi Boxing Tournament. Igama likaSimiso akufanele lishabalale. Uyiphakamisile iDumbe, uyiphakamisile iZululand, uyiphakamisile iKZN yingakho lapha sinabeBoxing South Africa. Isifiso sethu wukuthi kuqhamuke abanye oSimiso. Emidlalweni yama-Salga sizobe siphethe isithombe nefulegi elinoSimiso," kusho uButhelezi.
Izikhulumi bezishintshana zichaza uSimiso njengomuntu obelungile, ehlonipha futhi enamaphupho ngekusasa lakhe. Udlule emhlabeni kusadlule amasonto ambalwa ekade ethweswa iziqu kwiBSc Botany and Zoology e-University of Zululand. Uzakwabo esibhakeleni, obekade ejima futhi ehlala naye endlini, uMduduzi Mzimela, uthe bese emtholele umsebenzi uSimiso kodwa wangamtshela ngoba ebona ukuthi uzophazamiseka emalungiselelweni empi yesicoco.
"Ngiyazisola ukuthi angimtshelanga ngani. Bengithi uzophazamiseka uma ngimtshela ngaphambi kwempi ngoba ibhande ubezimisele ukuliwina. Bengizitshela ukuthi ngizomtshela emuva kwempi kodwa akusenzekanga. Ubefana nomfowethu engizalwa naye. Besigqokelana ngisho izimpahla. Wangitshela ukuthi yena ngeke afe njengawo wonke umuntu, uyofa esedumile. Engingakwazanga wukuthi uzofa esedumile noma uzofa bese eyaduma njengoba kwenzeka manje," kusho uMzimela.
Inhlangano i-WBF inqume ukwenzela uButhelezi elakhe ibhande elizosala nomndeni kwazise ikholwa wukuthi ubehamba phambili ngamaphuzu futhi ezoyiwina impi noMntungwa. UButhelezi waquleka sekusele imizuzwana engu-10 amenyezelwe njengompetha omusha we-WBF All Africa Lightweight.